China Dongshen ahịhịa elu mma eke ibu ibu badger ntutu resin aka onwe labelụ ihu ịcha ahịhịa Manufacturer and Supplier | Dongmei
Dongshen ahịhịa dị elu eke ezigbo ibu badger ntutu resin na -ejikwa akara ihu ịkpụ afụ ọnụ
Ahịhịa ịcha afụ ọnụ Dongshen bụ nke ejiri ntutu mara mma buru ibu na aka resin mee. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị.
Akụrụ ọnụ ihe Ajị ajị (super badgerr)
Aka ihe Remmehie mmehie, ma ọ bụ ahaziri ya
Nha eriri anyị nwere ike rụpụta dịka arịrịọ gị siri dị
Soap Na -eji ncha ịcha afụ kacha amasị gị. Ntutu Badger anyị kachasị mma bụ ntutu kacha baa nnukwu mma. na eriri ahịhịa anyị ejiri aka mee ga -adịru ọtụtụ afọ mgbe ejiri lekọta ya nke ọma.
Ntutu Super Badger
Nnukwu ahịhịa na -akpụ afụ ọnụ dị oke ọnụ karịa 'kacha mma' ma ọ bụ 'dị ọcha'. A na -esikarị n'azụ ya ewepụta ya. A maara brushes mara mma kacha mma maka otu egwu ọcha dị iche iche nke ejiri ndụmọdụ ọcha kpuchie, nke egosipụtara n'ụdị fan. Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ itinye brọsh mara mma nke ukwuu, jide n'aka na ị na -enweta ihe ị tụrụ anya ya. Ọ bụ ihe nwute na ọ bụ ihe a na -ahụkarị maka ntutu nke akpọrọ 'super' ka ọ bụrụ n'ezie ntutu nwere oke 'ntutu dị ọcha' nke a na -acha ọcha na nsọtụ ya yiri nnukwu.
Ọ bụ ezie na ọ nwere 'ajị anụ' dị ọcha ',' super 'ka a na -ahazi ma na -ahazi ya nke na arụmọrụ ya dị elu karịa nke' kacha mma '. Ntucha ahụ abụghị prickly.
Otu ụzọ isi chọpụta ma ọ bụrụ na ahịhịa na -ebu ibu ntutu 'super' bụ inyocha ụcha ndụmọdụ ahụ dị nro. N'aka nke ọzọ, 'super' brush nwere ntụpọ bristle bụ nke na -adịchaghị mma, na -acha ntụ ntụ; Ọzọkwa, ụcha ọkụ nke ntụzịaka ahụ agbatịghị ruo na mkpuru ntutu.
Nke gara aga: Dongshen Cosmetic Brush Cleaner Label Vegan Makeup Sponge Makeup Brush siri ike ncha ncha.
Osote: Akara Dongshen nkeonwe n'ahịa resin omenala na -ejikwa eke eke kacha mma baajị ntutu ọkachamara ịkpụ afụ ọnụ
Ịkpụ ntutu ahịhịa Badger
Dongshen etemeete ahịhịa N'ogbe abụọ-ọgwụgwụ supe ...
12pcs ịchọ mma ahịhịa setịpụrụ obi ọjọọ-free vegan syn ...
Mee Ncha, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa,